THBP: မြောက်ညွန်. ဒေါင်းပြောက်နဲ. သရက်သီးထောင်း။ အရာဇာလိုသိလေချင့်။
မြောက်ညွန်. ဒေါင်းပြောက်နဲ. သရက်သီးထောင်း။ အရာဇာလိုသိလေချင့်။
အစားအသောက် တိ မတင်စော်ကြာဗျယ်ဖြစ်လို. အယင်က ရိုက်ပြီးကေ မတင်ဖြစ်စော် ပုံချေတိ စုပြီးကေ ပြန်တင်ပီးလိုက်ပါမေ။
ငရုတ်သီး စပ်စပ် ချဉ်ပပေါက်နဲ. အရီးမ လက်ရာပါ။ ချက်နည်းကို ပြန်လို.သင်လိုက်အုံးမေ။
ရှားရှားပါးပါး မြောက်ညွန်.ကို အိမ်နားက ဈီးချေမှာ လားတို.တွိခီလို. အားရဝမ်းသာ ဝယ်ရပါရေ။ မြတ်ရှင်လာဖို.လို. ဟင်းချက်ဖို.ပျင်နီစော် နိက။ ချဉ်ဟင်းလေ့ မချက်ချင်။ သရက်သီးငပိထောင်းထားဗျယ်။ အချဉ်ပါဗျယ်။ ယဂေ မြောက်ညွန်.ချေက်ို ငပိစကေချေနဲ. အချိုချက်ဖို.စိတ်ကူးဗျယ် အချိုချက်ပလိုက်ပါယင့်။ မေမေစီယင်းပိုင်ချက်တေ။ အချဉ်ချက်ကေ မြောက်ညွန်.ချိုစော်ကို မသိလိုက်ပျယ်လတ်။ ပုဇွန်ခြောက်တစ်ကောင်နှစ်ကောင်ထည့်ရေ။ ပုဇွန်စိမ်း ၂ကောင်ကို အမြှိုးရအောင် ပိုင်းလို.ထည့်ေ၇။ ကြက်သွန်ဖြူစကေ ချေပါထောင်းလို.ထည့်ရေ။ ဟင်းရည်ယင်လို. ဆူရေအခါမှ မြောက်ညွန်.ကိုထည့်ရေ။ ငရုတ်သီးစ်ိမ်း ၂ ပိုင်းချိုးလို.ထည့်ရေ။ ၅ မိနစ် လောက်ရာ ထည့်ရရေ။ ကျက်ပါဗျယ်။ ချို က ချိုနဲ.။ မြတ်ရှင်တောင်က နည်းယူလားသိရေ။း)
ဒေါင်းပြောက်အိုးကပ်ချေ ချက်ပြီးကေ အိမ်က ထည့်ပီးထားစော်ပါ။ ကိုယ်ကတော့ ချက်ဖို.မတတ်သိ ငါးအိုးကပ်ချေကို။ ချက်ကြည့်ရဖို.သိ တစ်ရက်။
ယင်းချင့်လေ့ အိမ်ကပို.စော်ဗျယ် ။ လတိုင်း ဂဏန်း ပို.ပီးပါရေ။ အေမှာ ဈီးကြီးက မရှိ ဝယ်လို. မစားနိုင်။း(
မပါမဖြစ်။ သရက်သီးထောင်းထားရေ။ တို.စရာက ခရမ်းသီးပြုတ်နဲ. သခွားသီးကြွပ်ကြွပ်ချေတိ။း)
အင်း စားပလိုက်စော် ၁ ယောက်သုံးလောင်ဗွန်းစီ ကျမနားယေ။ ရွီးယင်းနဲ.တောင် ဝမ်းဆာလခရေ။ အရာတစ်ခေါက်ထမင်းပေါင်းစားဖို. မြတ်ရှင်ကိုခေါ်ရဖို.။
နောက်တရက်ပိတ်ခါမှ ထမင်းပေါင်းချက်စားလီဖို.ဗျယ်။ အမဲသား အရွတ်တိကို အားရပါးရ ငရုတ်သီး စစပ်နဲ. ရခိုင်ချက်ချက်မေ။ မေမေပက နည်းတောင်းထားဗျယ်။ ဟင်းအရံကတော့ ယင်းနိ ရှာလို.၇သမျှဗျယ်မနားယေ။ ကြိုတင်လို. လက်တို.ထားမေဂါး မြတ်ရှင်ရို. ဇံဇံရို. ခင်ဥမ္မာထွန်းရို. ကျော်ဖြိုးဝေရို.ကို လက်တို.ထားမေ ဒေဂါး။
စားဖို့ စော်တိ မြင်လို့ဝင်ကြည့် ခပါယင့်။ ဒေါင်းပြောက် ကို မနှက် ရစော် အင်တန်တောင် ကြာလား ပါဗျာ .... ကလန့်ကို တော့ မကြာမကြာ စားရပါယင့်။ ရခိုင် ထမင်းဝိုင်း ကို မြင်ရစော် ဆိုက်ကို နဲနဲ ရလား ပါရေဂါး။ ရခိုင်ပြည်ကို တခေါက် လားပြီး အိမ်တဂါ လည်လို့ထမင်း သုံးလ လောက် စါးခွင့် ရကေ ကောင်းပါဖို့ ။ အေခုတော့ အေသူချေ ခိုင်ဝေဇံ ဓါတ်ပုံ တိကို ကြည့်ပြီး အသာချေ ရှာရည်ကို သိမ်းလို့ပြန်တုတ် လားပါရေဂါး။
အဂေါင့် မဆွဲ ရကေလေ့ စိတ်ကူး နန့်ဆွဲရယောင် ပြောပြ ပုံပြ တတ်တေ မချေ ခိုင်ဝေဇံ ကို ကျေးဇူး တင်ခပါယင့်ဒေ။
Mrat Shun said...
ညဇာက မြောက်ညွန့်ချက်လို့စားကြည့်ရေ ရခရေနည်းအတိုင်း..ဟုတ်တေကကောင်းစားကောင်းရေ ချိုကချိုနဲ့.တစိချေချက်စားကြည့်စော်ဖြစ်လို့မ၀လိုက်..အရာတစ်ရက်အားရပါးရစားဖို့သိ ဟိဟိ.အမဲအူလုပ်ထားစော်ကစားကောင်းထမန်းထော.ယင်းပိုင်တခါလည်းမစားဖူးသိ.ဒေါင်းပြောက်ကိုမြင်လို့ အိမ်ကိုသတိရရေ.ရွာမှာဒေါင်းပြောက်လည်လို့စီရောင်းစော်အချေတိကိုလည်းပြီးသတိရရေ..ပြပြင်းသတ်လို့ခုန်နိန်စော်ဒေါင်းပြောက်တိကို မင်မင်ကသားနန့်သမီးစားဖို့အတွက် ဘရ၀ါစီလုပ်တေလေ.အဂုအိမ်ပြန်ကေကစားရချင်မှစားရဖို့.ဇာဖြစ်လို့ဆိုကေ မင်မင်က ဘရ၀ါမလုပ်ပီးဗျာယ်လတ်..ဖပြောင်းဆာလို့ခုန်နိန်စော်ဒေါင်းပြောက်ကို ကိုယ့်စော်ကို သတ်စားမှစားလီရဖို့ဗျာယ်..ဇာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွမ်းပြေပုံချေတိကိုကြည့်ပြီးကေစိတ်ကူးနန့်စားလိုက်ရရေအတွက် သူငယ်ချင်းခိုင်ဝေဇံကို ကျေးဇူးတင်ပါရေ
ကျေးဇူးပါ ဘရိုသိန်းနဲ. မြတ်ရှင်။ နောက်လေ့ လာဝင်စားခလိုက်ကတ်ပါအုံးသိ။း)
မြောက်ညွန်. ဒေါင်းပြောက်နဲ. သရက်သီးထောင်း။ အရာဇာလိ...
မယားတစ်ရာ ကိစ္စ ရျင်းလင်ချက်း(